LXVI kuendeswa kweiyo 2017 Planet Mubairo | Zvazvino Zvinyorwa
LXVI Kuunzwa kweiyo Planeta Mubairo. Uye anokunda ndiye… Javier Sierra
Diana Millan | | dzakawanda
Hatina kuita kukumbira uye mumusoro mumwe chete isu tatozivisa iwe kune iyo anokunda chikamu chazvino chePlaneta Awards, Javier Sierra. Kunyange zvakadaro, isu tiri kuzopa ongororo shoma yemanheru aGumiguru 15.
Vhiki rino kuendeswa kweLXVI kwePlaneta Awards kwakaitirwa muBarcelona. Iyi makumi matanhatu nenhanhatu edition yakarova iyo rekodhi zvine chekuita nemakore apfuura, paine huwandu hwenhamba mazana matanhatu nemakumi mana nematanhatu emabasa akaunzwa izvo chete 10 vaizopedzisa.
Kufanana naOctober 15 wega wega, iyo Palau de Congresos de Barcelona, ​​inopfeka mbatya dzayo dzakanakisa kupa nzvimbo kumakwikwi egore rinol. Vanyori, vatori venhau, vapepeti, vezvematongerwo enyika uye vane mukurumbira vanoungana kuti vazive kuti ndiani pavane gumi vakapedzisa achakunda mubairo uye kucherechedzwa kwemanheru.
Pakati pavo takakwanisa kuratidza kuvepo kwezvematongerwo enyika senge Xavier Albiol (purezidhendi wePP yeCatalonia) kana Miquel Iceta (munyori wePSC). Isu zvakare tine huvepo hwaSanti Vila (Gurukota reCatalan retsika) kana Ana Mufundisi (purezidhendi weCongress of Deputies) pakati pevamwe.
Vamwe vashanyi vasina kupotsa gala vaive mutori wenhau Julia Otero, iye zvakare mutori venhau uye munyori Máxim Huertas uyezve muhwina wegore rapfuura Dolores Redondo. Risto Mejide naLaura Escanes, Boris Izaguirre, Alberto Chicote kana Luis Piedrahita havana kupotsa chiitiko ichi futi. Kunyangwe zvakadaro, kushomeka kwekuvapo kwevamwe vaenzi kwakacherechedzwa nekuda kwemamiriro ezvinhu ezvematongerwo enyika.
Iyo gala yaive yakapihwa nemutori wenhau uye mutauri weiyo Antena 3 nhau chirongwa Ester Vaquero, uyo akavaraidza manheru nekuzivisa mavhoti avo vakapedzisa vakagamuchira panguva yemanheru. Kuburikidza nezvibodzwa zvakagamuchirwa nemabasa, vashanyi vakaita dziva. Vanokunda vaizogamuchira batch yemabasa akati wandei akaburitswa nePlaneta.
Iyo juri rinoumbwa naAlbert Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs naEmili Rosales Semunyori wekuvhota, akange asina nguva iri nyore yekurasa mabasa uye pakupedzisira achisarudza akahwina gore rino.
Mubairo wekukunda wakapihwa 601.000 euros uye 150.250 euros yekupedzisira. Pane ino nguva, sarudzo yejury inogona kuteverwa zviripo kubva pawebhu www.mumesoft.es kubva na23.30: XNUMXpm.
Idzo dzaive nguva dzekufungidzira kukuru kusvikira uyo anokunda uye wekupedzisira akaziviswa. Uye izvi, sekutaura kwatamboita, zvaive mhedzisiro:
Kukunda Basa: Moto usingaonekwe, naJavier Sierra (pasi pemanyepo e «Gomo rekugadzira», Victoria Goodman)
Wokupedzisira: Mhute muTangierrakanyorwa naCristina López Barrio
Javier Sierra. mufananidzo: EFE / Andreu Dalmau.
Pane ino nguva, basa raSierra, panguva ino rinotipa profesa wepilology kubva kuTrinity College (Dublin) ine midzi yeSpanish. Paanenge achienda kuMadrid, anozozviona apinda muchirongwa chakaomarara cheboka rekudzidza mukutsvaga Giraira Dzvene. Asi iyo nyaya ichawedzera kuoma panguva iyo nhengo yeboka.
Asi gore rino, kwete zvinyorwa chete zvataurwa nezvazvo. Ichi chave chinyorwa chakanyatso kutariswa nezvematongerwo enyika. Musi waGumiguru 14, musangano wenhau wakaumbwa nemaneja uye chikamu chevatongi chakaitirwa kuSanta Pau Modernist Campus. Sezvo zvinogona kufungidzirwa, musangano wevatori venhau wakaratidzirwa zvikuru nezviitiko zvechangobva kuitika zvematongerwo enyika uye sarudzo yake yekuendesa dzimbahwe rake kuMadrid.
Josep Creuheras, purezidhendi wekambani, akajekesa izvozvo sarudzo yekuchinja nzvimbo yakanga isingazungunuke. Nekudaro, ini ndinokuvimbisa iwe kuti muparidzi anotarisira kuenderera achibata makwikwi muBarcelonku. Nezve kukakavadzana kuri kuitika, vaCreuheras vakakwidza nhaurirano.
kutora mifananidzo La Vanguardia
Pekupedzisira, isu tinorangarira vakapedza gumi vePlaneta Awards:
-Nyanzvi, Heinrich Von Kügel (kunyepedzera)
-Ndiko kuti ndine nzara, Maria Eugenia Mayobre Jahn
-Hupenyu hutsva hwaPenelope, Bella Linardi (zita rekunyepedzera)
-Chikamu chekutanga, Antolin Sánchez Lancho
-Vakadzi vakaputsika, Voli povi (pseudonym)
-Chitsuwa chemu muses, Ricardo Pedreira Ulloa
-Gehena pasi peganda, Jesu Miguel Martínez
-Gomo rekugadzira, Victoria Goodman (zita rekunyepedzera)
-Mumumvuri wenhema, M. Palma Medina
-Unhu hwakashata, Eva Florence Benavidez
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » LXVI Kuunzwa kweiyo Planeta Mubairo. Uye anokunda ndiye… Javier Sierra
Aya ndiwo maratidziro atinoita Zuva reVanyori